नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : "अमेरिकामा इन्स्योरेन्सका नाममा यसरी ठगिन्छन नेपाली नेपाली एजेन्टबाटै !"
फेसबुकमा ५३000 भन्दा बढीले हेरिसकेको, हजार भन्दा बढीले लाइक गरेको, हजार भन्दा बढीले शेयर गरेको यो इन्स्योरेन्समा भैरहेको ठगी बिषयको जनचेतना मुलक भिडियो
* इन्स्योरेन्स बिशेषज्ञ अनिल खनाल भन्नुहुन्छ - "अमेरिकामा इन्स्योरेन्सका नाममा यसरी ठगिन्छन नेपाली, नेपाली एजेन्टबाटै ! लाइफ इन्स्योरेन्स एजेन्टहरूले 100 प्रतिशत सम्म कमिशन खाएर घटिया इन्स्योरेन्स भिडाउछन् !" * नेपाली समुदायलाई ठगीन बाट सचेत गराउने अभियान भाग - १, हाम्रो यो अभियान क्रमश जारी
रहनेछ । तपाईंलाई लागेका कुरा अनुभब पनि शेयर गर्दै गर्नुहोला ।
* इन्स्योरेन्स बिशेषज्ञ अनिल खनाल भन्नुहुन्छ - "अमेरिकामा इन्स्योरेन्सका नाममा यसरी ठगिन्छन नेपाली, नेपाली एजेन्टबाटै ! लाइफ इन्स्योरेन्स एजेन्टहरूले 100 प्रतिशत सम्म कमिशन खाएर घटिया इन्स्योरेन्स भिडाउछन् !" * नेपाली समुदायलाई ठगीन बाट सचेत गराउने अभियान भाग - १, हाम्रो यो अभियान क्रमश जारी रहनेछ । तपाईंलाई लागेका कुरा अनुभब पनि शेयर गर्दै गर्नुहोला । * इन्स्योरेन्स बिशेषज्ञ अनिल खनाल सँग तपाईंलाई लागेका कुरा, जिज्ञासा वा प्रश्न भए वहाँ सँग सोध्न सक्नुहुन्छ वहाँको फोन नम्बर हो - 703-789-2307, Face Book मा अनिल खनाल https://www.facebook.com/anil.khanal2010 , Email - anil.khanal@yahoo.com , visit www.nepalmother.com too. ************************************** Updated....... 02/12/2016 हिजो साँझ इन्स्योरेन्सको बिषयमा हामीले इन्स्योरेन्स बिशेषज्ञ अनिल खनाल जी सँग गरेको कुराकानी पछी हजारौँले यो कुराकानी हेरेर, लाइक गरेर, कम्मेन्ट गरेर, शेयर गरेर इन्स्योरेन्सको बारेमा समाजमा नयाँ तरँग उत्पन्न गराइदिनु भएको छ । हाम्रो उद्देस्य पनि के हो भने नराम्रो प्रोडक्टमा कोही नफसुन, नठगीउन, एजेन्टले पनि आफ्नो स्वार्थ र कमिशन मात्र नहेरेर Client लाई पनि फाईदा पुग्ने काम गरुन भन्ने मात्र हो । समाजमा बस्ने हरेकलाई फाईदा पुगोस भनेर यो अभियान शुरु गरिएको हो । कसै सँग रिस द्वेस भएर वा कसैलाई बिगार्न वा कसैलाई सपार्न यो अभियान शुरु गरिएको होइन । कुनै कम्पनीको बिरोध वा कुनै कम्पनीको समर्थन पनि हाम्रो लक्ष हुँदै होइन । चेतना आओस । हरेक Client ले हेरेर बुझेर इन्स्योरेन्स लिउन, नराम्रो प्रोडक्ट मा नफसुन, एजेन्ट पनि जिम्मेवार बनुन हाम्रो भन्नु मात्र त्यत्ती हो । अनिल खनाल जी को भनाइ सँग कसैको असहमती छ भने वहाँ सँग आफै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ । हामीले अनिलजी सँग कुरा गरेर वहाँ को भनाइ राखेका हौँ । त्यसैले हामीले वहाँको फोन ईमेल सबै इन्फर्मेशन दिएका छौं माथि नै । तर हजारौंं ले यो कुरा मन पराए पनि ७ -८ जना एजेन्ट मित्रहरुलाई पटक्कै मन परेनछ । वहाँहरुले अनिल खनाल जी को भनाइ गलत भनेर भन्दै हुनुहुन्छ । केहीले त मज्जाले गाली गर्न समेत भ्याउनुभएछ वहाँ हरुलाई बिशेष धन्यवाद । नभुल्नुहोला म आफै पनि यस बाट ठगीइसकेको भुक्तभोगी हुँं । सभ्य भाषामा हामीले यो अभियान जारी राख्ने छौं जनचेतना जगाउन । 99.9 प्रतिशतले सहि भनेर हामीलाई फिडब्याक दिइरहनु भएको छ । सबैलाई आ आफ्नो तर्क र बिस्लेशणका लागि धन्यवाद । १२ घण्टा भित्र, मलाई जबरजस्ती एजेन्ट बनाइयो, मेरो फोटो दुरुपयोग गरिएको छ म पनि मेरा कुरा राख्छु भन्दै आफु पनि पीडित भएको बताउने देखी मलाई बर्षको 13% आम्दानी हुन्छ भन्दै झुक्काएर साइन गराए म पनि ठगिएँ के गर्ने होला ? भन्दै गुहार खोज्ने हरुको आवाज पनि आइसकेको छ, हामी बिस्तारै ति आवाज पनि सार्वजनिक गर्ने छौं आबस्यक परेमा ! प्रतिक्षा गर्नुस । गाली गलौज र असभ्य भाषा प्रयोग गर्ने दुई जना 120% कमिशन खाने वाला एजेन्टको भनाइ डिलिट गरिएको छ । सभ्य भाषामा अाफ्ना भनाइ राख्ने हरेकलाई स्वागत गरिएको छ । आउनुस स्वस्थ बहस गरौँ । यथार्थ कुरा जनमानसमा पुर्याउँ, यो पनि धर्म हो । महायज्ञ हो मलाई त्यस्तो लाग्छ । *********************************************** सहि एजेन्ट, सहि इन्स्योरेन्स र राम्रा प्रोडक्ट बेच्ने हरेकलाई स्वागत छ आउनुस गलत के हो सहि के हो तपाईंले छातीमा हात राखेर आफुले जानेको कुरा बताइदिनुस हामी Client हरुलाई । हामी धन्य हुने छौं । ***************************** हामी नेपाल बाट अमेरिका आएका छौं । यहाँ काम गरेर खान पाईन्छ रोजगारीको कुनै समस्या छैन । कृपया कोही पनि गलत बाटो मा नजाउँ । ५ बर्ष पछी , १० बर्ष पछी बाटोमा भेट्दा हाँसेर राम्रो सँग बोल्न पाइयोस । हार्दिकता होस । त्यस्तो व्यबहार गर्न पाइयोस नकी फलानाले मलाई डुबाएको हो भनेर Client हिंड्ने, एजेन्ट टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने दिन नआवोस । सबैलाई चेतना भया । ********************************************************* जो जो साथीहरु एजेन्ट बनेर त्यस्ता आफूलाई कमिशन धेरै आउने तर Client मर्ने प्रोडक्ट बेच्नुहुन्छ, त्यस्ता कम्पनिमा काम गर्नुहुन्छ । जानेर वा नजानेर त्यो पाप गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस्ता मित्रहरु कृपया मेरो वाल र स्टाटस फोहोर पार्न नआउनुहोला बिन्ती छ । यस भन्दा माथि त्यस्ता प्रोडक्ट बेच्ने केही एजेन्ट मित्र हरु चोर भन्नु भन्दा पहिला चोरले खुट्टा ताने झै खुट्टा तान्दै हुनुहुन्छ । साबधान ! पर्दा खुल्दै छ । पर्खनोस केही समय । सबै इन्स्योरेन्स गलत हुँदैनन र सबै एजेन्ट पनि गलत हुँदैनन । सहि एजेन्ट सहि इन्स्योरेन्स र राम्रा प्रोडक्ट बेच्ने हरेकलाई स्वागत छ । काम गरेर खानु पर्छ, खान पाउनुपर्छ, तर ठगी गर्न कदापी पाइँदैन । मैले भनिसकेको छु म आफै ठगिएको छु प्रमाण छ । मलाई इन्स्योरेन्स बेच्ने एजेन्ट एक बर्ष सम्म फोन, ईमेल, टेक्स र भोइस मेल मा जबाफ दिन असमर्थ किन भएको हो ?? सबै कुरा एकै चोटि किन खोलौँ भनेर मात्र सँयमता अपनाएको हुँँ बिस्तारै खुल्दै जाने नै छ । पर्दे मे रहेने दो पर्दा न उठाओ पर्दा जो उठ्गयातो फिर खुल जायगा ..... भन्ने गीत ति आफ्नो मात्र कमिशन हेर्ने र Client मर्ने प्रोडक्ट बेच्ने साथीहरु याद दिलाउन चाहन्छु । हिम्मत छ भने म सँग आउनोस प्रमाण हेर्न । एजेन्ट को कर्म के हो ?? धर्म केहो ?? केबल आफ्नो कमिशन मात्र हेर्ने हो ?? Client को पक्ष बाट हेर्न पनि म चुनौती दिन्छु किन कि म Client हुँँ । ***************************************************** मलाई थाहा छ आफूलाई कमिशन धेरै आउने तर Client मर्ने प्रोडक्ट बेच्ने मित्र हरु यो भिडियो हेरेर म सँग अनिल जी सँग आगो हुनुहुने छ । हामी माथि खनिनुहुने छ । तर केही समय भित्रै वहाँ हरुले मनन गर्नुहुने छ । केही २०-२२ बर्से केही नबुझी त्यता लागेका ठिटा ठिटी देखी परिपक्व भएका सम्मले पनि एक दिन पक्कै यो रियलाइज गर्नुहुने छ । यती कुरा म दाबिका साथ भन्छु । सत्य कुरा तितो हुन्छ । *********************************** कृपया सबै सँग एउटा अनुरोध : यो कसैका बिपक्षमा वा कसैका पक्षमा चलाईएको बहस वा कसैलाई बिगार्न वा कसैलाई सपार्न गरिएको पहल पनि होइन । यथार्थ कुरा राखेर आँखा खुलाउन गरिएको एउटा सत्प्रयास हो । मनन गर्ने सबैलाई यसले लाभ दिने छ । अती भए पछी पर्दा खुलाउन थालिएको मात्र हो सम्बन्धितहरुले बुझुन ।